Kodzero-dzevanhu, 29 Mbudzi 2017
Chitatu 29 Mbudzi 2017
Dare Rinoti Vabva Kure Vane Kodzero yeKunyoresa Kuvhota
Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vanhu vane vabereki vasiri zvizvarwa zveZimbabwe vane zvitupa zvakanzi Alien vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya.
VaMnangagwa Vanofanira Kutenda Mauto Akavaisa Panyanga
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo VaEmmerson Mnangangwa vaikodzera kuva mutungamiri webato ravo reZanu PF pamwe nehurumende nekuda kwehukuru hwavo, mukana uyu wakapedzwa kutanga kwemwedzi uno apo vakadzingwa zvese muhurumende nemubato.
Zimbabwe Exiles Forum Yojekesa Zvekuita neChirongwa cheZimbabwe Exemption Permit
Zuva rekunyorera kumutsiridza magwaro aya padandemutande rekugumisira musi wa 30 Mbudzi 2017, asi vanhu vane kusvika kupera kwaNdira gore rinouya kuti vaendese magwaro anodiwa.
VaMnangagwa Vokurudzirwa Kuferefeta Zvakaitika pa$15 Billion yeMangoda Yakatsakatika
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu, uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, vanoti VaMnangagwa vanofanira kutsvaga kwakaenda mari iyi kuitira kuti iwanikwe yobatsira kusimudzira nyika.
Nyanzvi Dzoudza VaMnangagwa Kuti Vatende Mauto
Nyanzvi idzi dzinoti VaMnangagwa vanofanira kutenda mauto nekuvadzora mubato pamwe nekuvagadza pachigaro chekutungamiri nyika.
Hurumende Yokurudzirwa Kuvandudza Maguta Akaita seHarare Kwete Kuvaka Guta kuMt Hampden
Rimwe Sangano reVashandi Rodyira Marasha Vanotyora Kodzero dzeVanhukadzi
Muchuchusi Ozvimbirwa neMaitiro Ake Mukutongwa kwaVaBiti
Zanu-PF Yoita Musangano wePolitburo Mukuparura Kwayo Musangano wePagore